Waxaan ahay gabar jirta-17-sanno. Waxaan jeclahay in aan guursado saaxiibkayga. Ma tahay midaasi mid laga oggolyahay dalka Jarmal? – Tips for refugees
Waxaan ahay gabar jirta-17-sanno. Waxaan jeclahay in aan guursado saaxiibkayga. Ma tahay midaasi mid laga oggolyahay dalka Jarmal?
Waad guursan kartaa saaxiibkaaga.
Guurku waa xiriirka rasmiga ah ee qaanuunka hortiisa.
Xafiis diiwaan gelin ayaa xaqiijin doona xiriirka.
Waxaa jira xeerar badan oo xiriir la leh guurka ka dhaca dalka Jarmal.
Waxaa laguu oggolyahay in aad ku guursatid da’da 18.
Mararka qaar waxaa laguu oggolyahay in aad ku guursatid da’da 16:
Laakiin waa in uu lammaanahaagu yahay mid ka wayn 18.
Waana in ay maxkamada qoysku oggolaato.
Adiga kaliya waxaa laguu oggolyahay in aad guursatid hal qof.
Guurarka badan waa kuwo mamnuuc ka ah ama ka reeban dalka Jarmalka.
Waxaa laguu oggolyahay in aad dhammaysid guurkaaga wakhti kasta haddii aadan guurkaasi farxad ku dareemaynin.
Midaasna waxaa lagu magacaabaa furiin.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad badan boggaan internetka ah: http://www.zanzu.de/de/scheidung-0
Adigu laguuma oggola in aad guursatid qof katirsan qoyskaaga.
Xitaa ilmo adeerada kuma guursadaan ilmo adeeradooda kale gudaha dalka Jarmal.
Carruurta ka dhasha guurarkaan waxaa ku dhacaya cudurada hidaha la isaga qaado.
Sidaas darteeda ma ahan fikrad wanaagsan in la guursado qaraabadaada khaaska ah.
Adigu khasab kuguma ahan in aad guursatid!
Waxaad heli kartaa caawimaad haddii uu qof kugu khasbayo in aad guursatid.
Doorashada kale waxay tahay:
Waxaad ku guursan kartaa qaabab hab dhaqan diimeed ah.
Waxaa jira hab dhaqano guur badan oo kala duwan.
Laakiin gudaha dalka Jarmalku kuwaan ma ahan kuwo rasmi ka ah sida waafaqsan sharciga waddanka.
Previous Previous post: Saaxiibkayga oo jira (15) iyo aniga oo jira (15) aad ayaynu isku jecelnahay. Wuxuuna doonayaa in uu galmo ila sameeyo. Ma ku khasbanahay in aan galmo la sameeyo si uusan iiga tagin?
Next Next post: Waalidiintayda waxay ii heleen qof i guursada. Laakiin anigu ma DOONAYO in aan guursado. Maxaan sameeyaa?